Awoodda bulshadu waxay ku dhalaalaysaa barnaamijka barashada IMEX America
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirarka » Awoodda bulshadu waxay ku dhalaalaysaa barnaamijka barashada IMEX America
Sida laga soo xigtay Dalai Lama: "Bulshada aadanaha la'aanteed, hal qof oo bini'aadan ah ma noolaan karo." Muhiimada ay leedahay bulshadu waxay ku soo noqnoqotaa inta uu socdo barnaamijka waxbarashada IMEX America, Noofambar 9-11, oo leh fadhiyo daboolaya awoodda sheekada, qiimaha la wadaago, iyo dabeecadda aadanaha.
Waxbarashada bilaashka ah waxay dabooshaa awoodda sheekada, qiimaha la wadaago iyo dabeecadda aadanaha.
Saxafiga Sharad Kharé ayaa bixin doona aqoon isweydaarsi ku saabsan sheeko-sheegidda iyo xirfadda aan la aqoon ee dhegeysiga sheekooyinka.
Sharad wuxuu u horseedi doonaa ka -qaybgalayaasha layli is -weydaarsi is -dhexgal ah oo ku dhiirri -gelinaya dadka kale inay tixgeliyaan sida sheekada shaqsi u qaabayn karto dhaxalkooda.
Xikmadda Dalai Lama waxaa si fiican u yaqaan weriye Sharad Kharé oo martigeliyay oo diiwaangeliyay isaga, oo ay weheliyaan qaar ka mid ah magacyada ugu waaweyn ee Hollywood, ganacsi, iyo dhaqan, oo qayb ka ah kaalintiisii ​​wada-aasaasaha Taariikh nololeedka Aadanaha. Sharad wuxuu bixin doonaa aqoon-is-weydaarsi ku saabsan sheeko-sheegidda iyo xirfadda aan la aqoon ee dhegeysiga sheekooyinka. Kalfadhiga labaad, “Waa maxay dhaxalkaagu ?,” Sharad wuxuu ka qaybgalayaasha ku hoggaamin doonaa layli is -waraysi dhexgal ah oo ku dhiirri -gelinaya dadka kale inay tixgeliyaan sida sheekada shaqsi u qaabayn karto dhaxalkooda.
Sharad Kharé, Aasaasaha Taariikh nololeedka Aadanaha
Wadahadallada qaabka TED waxay ku qotomaan dabeecadda aadanaha
Taariikh Nololeedka Aadanaha waa mid ka mid ah saddexda hay'adood oo bixiya wada-hadallo TED-deg deg ah inta lagu jiro bandhigga. Wadahadalladan waxay udub dhexaad u yihiin dhinacyo kala duwan oo dabeecadda aadanaha ah. Gacaliye Dunidu waa urur u jihaysan caawinta kooxaha-laga bilaabo xiddigaha isboortiga ilaa xirfadleyda ganacsiga-si ay si dhaqso leh u sameystaan ​​dammaanad qoto dheer. Habka sheekadooda-sheekada waxaa taageera sayniska kooxduna waxay sharraxaysaa in "daraasaduhu ay muujiyeen in helidda macne togan dhacdooyinkii hore ay ku xiran tahay dareen nafsi ah iyo qanacsanaanta nolosha weyn." Ku biiristooda waa Libaaxyada TLC oo uu aasaasay Gian Power oo ka tagay dunida shirkadeed ka dib masiibo qoys oo dhistay beel. Natiijadu waa koox caalami ah oo shaqsiyaad cajiib ah - “libaaxyo” - kuwaas oo wadaaga sheekooyinkooda, dagaalladooda iyo guulahooda si ay u taageeraan una dhiirrigeliyaan kuwa kale. Gian wuxuu sharraxayaa: “Waxaan u socdaa inaan sameeyo goobaha shaqada si dareen ahaan loo soo dhaweeyo, meelaha aad ku aaminto kuwa kugu xeeran, halkaas oo ay kooxuhu u dareemaan sidii qoysas labaad. Kaliya maahan wax sax ah laakiin waa ganacsi lama huraan ah oo si toos ah ugu xiran waxsoosaarka shaqsi iyo ganacsi. ”
Xuddun adag oo mideeya bulshooyinka waa qiyam la wadaago - ma aha tirakoob. Taasi waa sida uu qabo David Allison, aasaasaha Valuegraphics. Khabiir ku ah dabeecadda macaamilka, David waa la -taliyaha sumcadaha caalamiga ah iyo u -doodaha hormuudka u ah iska -tuuridda fikradaha dadka ee duugoobay. Kalfadhi madax-bannaan oo gaar ah oo loogu talagalay ka-qaybgalayaasha IMEX America, wuxuu daaha ka qaadi doonaa natiijooyinka daraasad aasaasi ah oo sahamineysa ka-qeybgalka dhacdada iyo ka-qeybgalka masiibada kadib. Tan waxaa soo raaca aqoon isweydaarsiyo taxane ah inta lagu jiro saddexda maalmood ee bandhigga oo ay ku jiraan mid lagu tilmaamay "bandhig-ciyaar-qayb, aqoon-isweydaarsi qayb" oo loogu talagalay in lagu xiro dhibcaha u dhexeeya qiyamka asaasiga ah ee dadka iyo fikradaha naqshadaynta dhacdooyinka hal-abuurka leh.
Melissa Park oo ah soosaaraha dhacdooyinka caalamiga ah ayaa sidoo kale qaadata hab cusub oo dib loogu fikiro dhacdooyinka jawiga ganacsi ee isbedelay. Seminarkeeda Dib-u-dhiska dhacdada shaqsi ahaaneed waxay kaala talin doontaa sida laysugu daro tamarta iyo xamaasadda dhacdo toos ah oo leh waayo -aragnimo siman oo nabdoon, la wadaagaya casharrada soo saarayaasha muusikada.
Waxbarashada waqtigeedii loogu talagalay dhammaan qaababka waxbarashada
Carina Bauer, oo ah Maamulaha Kooxda IMEX, ayaa sharraxaysa sababta mawduuca bulshadu uu waqtigiisa ugu habboon yahay: “Hadda waxaa jira aqoonsi dib loo cusboonaysiiyay ahmiyadda dhismaha bulshada. Qaar badan oo ka mid ah warshadaha, bandhiggu wuxuu u taagan yahay fursad gaar ah oo uu kula kulmo asxaabtiisa iyo la -hawlgalayaashiisa oo aysan arag ku dhawaad ​​2 sano. Waxaan rabnaa inaan siinno ka -qaybgalayaasheena fursad ay dib ugu xirmaan oo kor ugu qaadaan xirfaddooda, iyagoo wata aalado ay ku abuuraan bulshooyinkooda shirarkooda iyo dhacdooyinkooda. Sidaa darteed, waxaan u qaabaynay barnaamijkeenna waxbarasho agagaarka sahaminta waxyaabo kala duwan oo ah waxa ay ka dhigan tahay in la dhiso oo laga mid noqdo bulshada - iyo fadhiyadayada waxbarashada waxaa hormuud ka ah qaar ka mid ah shaqsiyaadka dhiirrigelinaya sheekooyinka cajiibka ah si ay u sheegaan. ”
Barnaamijka barashada bilaashka ah ee IMEX America ayaa bilawday oo leh Smart Monday, oo ay ku shaqayso MPI, 8 -dii Nofembar waxayna ku sii socotaa aqoon isweydaarsiyo taxane ah, miisas mowduucyo kulul leh iyo siminaaro inta lagu jiro saddexda maalmood ee bandhigga - dhammaantood waxaa loogu talagalay inay wax ka qabtaan qaababka waxbarasho ee kala duwan.
IMEX America waxay ka dhacaysaa Nofeembar 9-11 meel cusub-Mandalay Bay, Las Vegas-oo leh Smart Isniin, oo ay ku shaqayso MPI, Nofeembar 8. Diiwaangeli xiisaha halkan.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan fursadaha hoyga iyo gujinta buugga halkan.